ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 8) | Lumyo Chit
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 8)
1321 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
April 28, 2011 at 2:10 pm | Replyဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်များအရ …
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး…
1.ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါး မှ မွေးဖွားသူများ၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည် ၊
2.နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
3.ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူ ညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း
4.နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူး ဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှုမရှိစေရကြောင်း
5.နိုင်ငံသားများသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ကုန်သွယ်ရောင်း ၀ယ်ဖောက်ကားမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ၀ိဇ္ဇာပညာ၊ သိပ္ပံပညာနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တူညီသောအခွင့် အလမ်း ရရှိစေရမည်ဖြစ်ကြောင်း
6.မည်သူ့ကိုမျှ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီမှတစ်ပါး အသက်ကိုဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရ
7.ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိ၏ယုံကြည်ချက် ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်၊ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်တို့ကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း
8.နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေများနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင် အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်းအရုံး များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်၊ တိုင်း ရင်းသားလူမျိုး အချင်းချင်းကို လည်းကောင်း၊ အခြား ဘာသာ သာသနာကိုလည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေဘဲ မိမိချစ်ခင် မြတ်နိုးသည့် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ သာသနာနှင့် ဓလေ့ထုံတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်တို့ လည်း ရှိပါသည်။
9.တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရ ခွင့်ပြုသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး စီရင် ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားသူကြီး၏ ချုပ်မိန့်မရရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ၂၄ နာရီ ထက်ပို၍ ချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုရ
10.နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပ၌ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း
မင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိ …မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး စနစ်သစ်အရ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၃၈ ချက်ရှိမင်းမှာသစ္စာ လူမှာကတိ …မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး စနစ်သစ်အရ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် ၃၈ ချက်ရှိ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး စနစ်သစ် ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေ ပြီဖြစ်ရာ စနစ်သစ်အရ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် ၃၈ ချက်ရှိနေပြီး အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ရပ် ရယူလိုပါက ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် သို့ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားချက်များအရ သိရသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို အခန်း ၈ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ပုဒ်မ ၃၄၅ မှ ၃၉၀ အထိဖြစ်ကြောင်း ပုဒ်မ ၃၄၅ မှ ၃၈၂ အထိ ပုဒ်မ စုစုပေါင်း ၃၈ ခုတွင် နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း ပုဒ်မ ၃၈၃ မှ ပုဒ်မ ၃၉၀ အထိ ပုဒ်မပေါင်း ရှစ်ခုတွင် နိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်များ ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သိရသည်။
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အများပြည်သူ အကျိုးငှာ ဥပဒေနှင့်အညီ ကြိုတင်ကာကွယ် ထားရှိရန် လိုအပ်သောကိစ္စ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ ခွင့်ပြု သည့် ကိစ္စမှတစ်ပါး စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားသူကြီး၏ ချုပ်မိန့်မရရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ၂၄ နာရီထက်ပို၍ ချုပ်နှောင်ခြင်း မပြုရဟု နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများထဲတွင် ထည့်သွင်းထား . . .
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါး မှ မွေးဖွားသူများ၊ ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး သူများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်သည်ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅ တွင် ဆိုထားပါသည်။
နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူ ညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူး ဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှုမရှိစေရကြောင်း နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များထဲတွင် ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
နိုင်ငံသားများသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ ကုန်သွယ်ရောင်း ၀ယ်ဖောက်ကားမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ၀ိဇ္ဇာပညာ၊ သိပ္ပံပညာနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တူညီသောအခွင့် အလမ်း ရရှိစေရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များထဲတွင် ပါဝင် နေပါသည်။
ထို့ပြင် မည်သူ့ကိုမျှ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီမှတစ်ပါး အသက်ကိုဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရ ဆိုသည့်အချက်သည်လည်း နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိ၏ယုံကြည်ချက် ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်၊ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်တို့ကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာ ရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ကိုယ် ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထား သည့်ဥပဒေများနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင် အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစည်းအရုံး များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်၊ တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အချင်းချင်းကို လည်းကောင်း၊ အခြား ဘာသာ သာသနာကိုလည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေဘဲ မိမိချစ်ခင် မြတ်နိုးသည့် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ သာသနာနှင့် ဓလေ့ထုံတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်တို့ လည်း ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အများပြည်သူ အကျိုးငှာ ဥပဒေနှင့်အညီ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရှိရန် လိုအပ်သောကိစ္စ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရ ခွင့်ပြုသည့်ကိစ္စမှတစ်ပါး စီရင် ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားသူကြီး၏ ချုပ်မိန့်မရရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ၂၄ နာရီ ထက်ပို၍ ချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုရဟု နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများထဲ တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။
“နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မူလအခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်တွေ အခန်းမှာ ပေးအပ်ထားတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူလိုရင် သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်ကို လျှောက်ထားပိုင် ခွင့်ရှိရမယ်လို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၇ မှာဆိုထားတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအခန်းမှာပေးအပ်ထားတဲ့ အခွင့် အရေးတွေနဲ့စပ်လျဉ်းပြီးလျှောက်ထား လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ရှေ့တော် သွင်းစာချွန်တော်အမိန့်၊ အာဏာပေး စာချွန်တော်အမိန့်၊ တားမြစ်စေ စာချွန်တော်အမိန့်၊ အာဏာပိုင်မေးစာ စာချွန်တော်အမိန့်၊ အမှုခေါ်စာ စာချွန် တော်အမိန့် တစ်ရပ်ရပ်ကို သင့်လျော် သလိုထုတ်ဆင့်ပေးခွင့်အာဏာရှိရ မယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ကိုအပ်နှင်းတဲ့ စာချွန်တော်အမိန့်တွေ ထုတ်ဆင့်ခွင့်အာဏာဟာ တခြား တရားရုံးတွေကို တည်ဆဲဥပဒေတွေ အရအပ်နှင်းထားတဲ့ စာချွန်တော် အမိန့် သဘောမျိုး သက်ရောက်တဲ့ အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပိုင်ခွင့် အာဏာကိုတော့ မထိခိုက်စေရပါဘူး”ဟု ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးက ရှင်းပြပါသည်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးနှင့် ဆက်ဆံသော နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပ၌ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အထက်တန်းရှေ့နေတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ထို့အတူ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်း၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မြင့်မားလာစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း၊ အများပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတော်အား ကူညီရန်တာဝန်ရှိကြောင်း နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် တာဝန်ရှိ ကြောင်း နိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များထဲတွင် ပါဝင်နေပါသည်။
“နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဟာ နိုင်ငံသားတွေထံက ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး မှာ တည်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူတွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးကပြဋ္ဌာန်းချက် ၄ ချက်မှာပါ ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာစတင် ကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ ပြည်သူတွေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက လေးစားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါ တယ်။ လေးစားသလိုပဲ ပြည်သူတွေ လိုအပ်ချက်၊ အခွင့်အရေးတွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအမှန်နဲ့ ရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သမ္မတ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် စစ်မှန်ပြီး စည်းကမ်းရှိတဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်က အဓွန့်ရှည် တည်တံ့အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဥပဒေပညာရှင် တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
ပသီက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလား ပသီလူမျိုးစုတွေလား.. နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ
နေထိုင်သူအားလုံး ရ ရမယ့်အခွင့်အရေးပါ… ဦးလေးဆွေးနွေးတာ လူမျိုးစုအရေး ..
အဲဒီတော့ လူမျိုးစုအရေးနဲ့ နိုင်ငံသားအရေး ဘယ်လိုဆက်စပ်တာလဲဆိုတာ ဘယ်လို ဆက်စပ်တာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါအုံး..
အသေးစိတ်ရေးပြီတင်ခါနီးမှာ မီးပျက်သွားတော ရေးတာ အလကားဖြစ်သွားပြီး။
နောက်မှပြန်ရှင်းပြပါမယ်။ကိုစွာလေ ရေးတဲ့စာထဲမှာ အဖြေပါသွားဆိုတာသတိမပြုမိဘူးနော်။
နောက်နေ့ ကော်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့အခါရှင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်ဥပဒေ နှံ့စပ်သူပါ။
ကျွန်တော် တင်ပြတာမမှားခဲ့ပါဘူး။အောက်ပါဥပဒေ ကိုသေချာနားလည်အောင်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ကိုစွာရေးတဲ့စာနှင့်
ကိုစွာလေပြောတဲ့ ဦးလေး တင်မောင်
Permalink သန့်စင်ဖြိုး က on Sunday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အဘရေ… စိတ်မလောပါနဲ့… ကိုတင်မောင်က စုစောင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်… တစ်လုံးတစ်ပါဒတစ်ပိုဒ်မှ မကျန်အောင်ဖတ်ထားပါတယ်… သူကိုယ်တိုင် စုစောင်းမှုပြီးတဲ့အထိစောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့… ခေါင်းစဉ်မှာ ပသီလူမျိုးစု သမိုင်းအထောက်အထားများစုစည်းရအောင် လို့တပ်ထားတဲ့အတွက် ကိုတင်မောင်တင်ပြတဲ့အထဲက လူမျိုးစုသမိုင်းအထောက်အထားတွေကို ဖတ်ထားလိုက်ပါဦး… လူမျိုးစုနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့ကိုတော့ ရောပြီးမမြင်လိုက်ပါနဲ့ဦး… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူမျိုးစု(ဝါ)တိုင်းရင်းသား ဆိုတာက နိုင်ငံသားနဲ့မတူပါဘူး… လူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုခွင့်တာဟာ လူတစ်ဦးချင်းဆီကိုကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ပဲ လူအရေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိတဲ့ လူမျိုးစု(ဝါ)တိုင်းရင်းသားကို ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးချင်းဆီအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုပါ… နိုင်ငံသားနဲ့ လူမျိုးစု(ဝါ)တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့စကားရပ်ကြားက ကွဲပြားခြားနားချက်ကိုပြောပါဆိုရင် အထိမိဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသူတိုင်းဟာ လူမျိုးစု(ဝါ)တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး… လူမျိုးစု(ဝါ)တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသူတိုင်းကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်… အဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ထားပြီးတော့ ကိုတင်မောင်ရဲ့စုစည်းမှုအပြီးအထိစောင့်ကြည့်ပြီးမှ ဒီစုစည်းမှုအတွက် စကားပြောကြရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်… အဘစွာ ဘယ်လိုမျိုးခံစားမိနေတယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ပိုပြီး Smart ကျတဲ့ ဖြေရှင်းမှုလေးဖြစ်လာဖို့အတွက် ကိုတင်မောင်ကို အဆုံးတိုင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့…
ကိုတင်မောင်လည်း စုစောင်းနေဆဲဆိုလို့ တစ်ခုလောက်မှာပါရစေ… ကိုတင်မောင်ရဲ့စုစောင်းမှုအားလုံးပြီးသွားရင် ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြောပါခင်ဗျာ… ဒီစုစောင်းမှုဟာ ဘာကိုရည်ရွယ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုတင်မောင်ရဲ့ စုစောင်းမှုပြီးဆုံးတဲ့အခါ ပြောပြပေးပါ (အခုမပြောပါနဲ့ဦး လုံးဝလုံးဝ မပြောပါနဲ့ဦး)… အခုတော့ စုစောင်းနေတယ် စုစည်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ ဘာမှဝင်မပြောချင်သေးပါဘူး… ပြောပြန်ရင်လည်း ကဖျက်ယဖျက်လုပ်တယ်လို့အထင်မှားမှာစိုးရိမ်ပါတယ်… အဲ့ဒီတော့ ကိုတင်မောင်စုစည်းပါ စုစောင်းပါ… အားလုံးစုစည်းစုစောင်းလို့ပြီးပြီဆိုရင် ဒီစုစည်းစုစောင်းထားမှုအတွက် ကိုတင်မောင်တစ်ခုခုတော့ တာဝန်ယူပြောရမယ်ဆိုတာလေး မမေ့ပါနဲ့…
အလ္လာဟို့အရှင်မြတ်ထံမှ ကောင်းချီးချမ်းသာအဖြာဖြာကျရောက်ပါစေ… (အာမီးန်)
Permalink ၀ိုင်း က on Monday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကျွန်တော် ဒီစကားဝိုင်းကို (အထူးသဖြင့်) ကိုတင်မောင်ရေးနေတာကို ဘာမှ ၀င်မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ ………….. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပသီလို့ ခံယူထားသူတစ်ယောက်ပါ …. ကျွန်တော်စာတွေရေးရင်လည်း ပသီဆိုတာကို ထည့်ရေးပါတယ်။ ကိုတင်မောင်စုဆောင်းတာတွေက လွဲနေတယ် (လွဲနေတယ်လို့ တည့်တည့်ပြောရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး) … ကိုတင်မောင်ရဲ့ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ် …. ဒါပေမယ့် စေတနာအလွဲတော့ မဖြစ်စေလိုပါ …..
Permalink အဘစွာ က on Monday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၁၉၈၂ ခုနှစ်ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်း( ၂ )တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့်စပ် လျဉ်း ၍အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားသည်။
အပေါ်က ပြဌန်းချက်များအရဆို ပသီလူမျိုးစုတော့ပါမလာဘူးဗျ… ကဲပါ..ထားလိုက်ပါတော့..
ကျတော်မေးချင်တာက ပသီတွေက လူမျိုးစု ဆိုရင် လူမျိုးစုအခွင့်အရေး အကြောင်းပဲပြောရမှာပေါ့..
ဘာလို့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို စုဆောင်းရတာလဲ. ခဏခဏ လည်း ၀င်မပြောချင်ဘူးဗျ… ဒါနဲ့ စကားမစပ်
ဦးလေး က ဥပဒေ နှံစပ်တဲ့ သူဆိုရင် တရားမ နစ်နာမှုနဲ့ ပသီ လူမျိုးအတွက် အစိုးရကို တရားစွဲကြည့်ပါလား…
Permalink kotinmaung က on Monday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အခု ကော်နက်ရှင်လုံ့ဝ မကောင်းဘူးဗျာ။ကျွန်တော် လေ့လာတွေ့ရှိ
ချက်ကိုစုစည်းတင်ပြနေဆဲပါ။၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ က လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ လူဦးရေ သန်း(၆၀) စလုံးနဲ့သက်ဆိုင် တဲ့
ဥပဒေပါ။ ဥပဒေ ဟာ အလွန်သိမ်မွေ့တယ်။ဒီဥပဒေ အတွက် နည်း ဥပဒေရှိသေးတယ်။ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိုအပ်သည်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်
်ကြီးက သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ဆန္ဒမစော ပါနှင့် လောလော ဆယ် ပသီ နာမည်နှင့် အစိုးရထံမှ မှတ်ပုံတင်
ခွင့် ရမရ ဆိုတာ အဖြေဘဲ။မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လိုပင်ခေါ်ဆိုစေကာမူ အစိုးရက
အသိအမှတ် မပြုရင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ အပေါ်က ဥပဒေ ကိုဒီနေရာ
ရာမှာ ဖေါ်ပြတာက စကားရှေးနောက် ညီမညီ သိဖို့လိုတယ်။ဒါကို မီးမောင်း
ထိုးပြချင်ပါတယ်။ အမှတ်အမှတ်ပြုခံရတဲ့လူတောင် လက်မခံဘူးဆိုတာ
ဥပဒေ လမ်းကြောင်း ဒီလိုရှိတယ်။ကိုယ်ရနေတဲ့ အခွင့် အရေးကဟုတ် သလား၊မဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော် တင်ပြတဲ့ နိဒါန်းမှာ ဥပဒေ အကြောင်း
အရာဖြစ်တယ်။အဲဒီ ဥပဒေက ဆုံးဖြတ်မဲ့ကိစ္စကို စုစည်းနေတာဖြစ်တယ်။
အမြင်ချင်းမတူတော လွဲတယ်လို့ဘဲထင်ထင် ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။လုံ့ဝစိတ်
မှု ကျမ်းခိုင်လုံမှုအတွက် စာအုပ်ရှာနေတယ်။ကော်နက်ရှင် မကောင်းဘူး။အမှာူး ပြင်လို့လဲမရဘူး။
အထွေထွေက`ဏ္ဍ ပါ ပုဒ္မ – ၇၅ – ဤဥပဒေပြဌန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်
နိုင် ရန်အလို့ငှါ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ သည်လို အပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီ (ယခု ပြည် ထောင်စုအစိုးရ) ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။
တိုနိုင်ငံ သားဥပဒေ ပုဒ္မ ၇၅ ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၁၃/၈၃ ဖြင့် (၂၀-၉-၈၃) နေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးနည်းများ (နိုင်ငံသား ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးနည်း) ၏ အခန်း (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အခန်းတွင် – အပိုဒ် – ၄- ၁၈၂၄ ခှုစ်တွင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ ထိုကာလ၏ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားသားအများအပြားမြန်မာနိုင်ငံ တော် အ တွင်း သို့ ဝင်ရောက် နေထိုင်လာ ခဲ့ကြ သည်။ ထို့ကြောင်း မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်၊ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခု မတိုင်မီ ကာလ ကို ပိုင်းခြား သတ်မှတ် ခြင်းဖြစ်သည်။
စလာမ် လောလောဆယ် ဘာမှမပြောဘဲ ဥပဒေ အရ သူဘာပြောမလဲ ဆိုတာ
က အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာအပြေည့်အစုံ မရေးပြနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါ။
တစ်နေ့ အပြင်မှာ တွေ့ရင် ပိုပြီးရှင်းသွားပါလိမ်မည်။နောက်ထပ်အထောက်
အထားအများကြီးရှိတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော် ထံမှ စာအုပ်ငှားသွား
ပြန်မပေးလို့ ဒုက္ခဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ် ၀ိုင်းတို့ အထောက်အထားရှိရင်ကူညီပါ။
Final သုံးသပ်ချက် ကျွန်တော် ရေးပြပါမယ်။စောင့်စိုင်းပေး ပါလို့မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။ – စလာမ်
အသိအမှတ် မပြုရင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး
အစိုးရ အသိအမှတ် မပြုရင် ဘာတွေ ဆက်လုပ်အုံးမလဲဆိုတာ လည်းသိချင်ပါတယ်။ Exit plan ပေါ့..
ဦးလေးက ပသီ သမိုင်းကို လေ့လာနေတယ်ဆိုတော့ အစိုးရ အသိအမှတ်မ ပြုရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ..
Permalink သန့်စင်ဖြိုး က on Monday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကိုစွာလေးဟ်နဲ့ မဝိုင်း… ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်… တစ်စိတ်လောက်စောင့်လိုက်ကြပါ… ဟိုလူက ဟိုဟာထောက် ဒီလူကဒီဟာထောက်… အဲ့ဒါကို ကိုတင်မောင်က သူနားလည်သလိုပြန်ဖြေ… အကြောင်းအရာတွေက ဗလပွ… ဒီတော့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တာတွေအားလုံးကို ကိုတင်မောင်တင်ပြပါစေ… အဲ ကိုတင်မောင်ကို အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့မေးသင့်တာမေးခွန်းတစ်ခုတည်းပါပဲ…
ကိုတင်မောင်ပြောသလို ပသီလူမျိုးစု သမိုင်းအထောက်အထားများစုစည်းပါစေ… ပရောဂျက်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုနေတော့ တားရခက်သားလား… သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒါပသီလူမျိုးစု သမိုင်းလို့ထင်ပေမဲ့ ကျနော်တို့က မထင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ… ဒါမျိုးက ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတနဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ကို မူတည်ပြီး ကွာကြတာမျိုးဆိုတော့ ကိုတင်မောင်လည်း သူ့မှာရှိတဲ့ အသိနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာ ပိတ်ပင်တားမြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ… ဒါ့ကြောင့် ကိုတင်မောင်အနေနဲ့ ဘယ်တော့ စုစောင်းမှုပြီးဆုံးမယ်ဆိုတာလေးသာ ကျနော်တို့ကိုပြောပြပေးပါ… အတိအကျမပြောနိုင်ရင် ခန့်မှန်းခြေလေးတော့ပြောပြပေးပါ… ဒါဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုတာပါ… မမြင်သလိုလုပ်ပြီး ရူးသလိုလိုရွှေပျောက်သလိုလိုနဲ့ ဒီမေးခွန်းကိုရှောင်မနေပါနဲ့…
ဒီစကားဝိုင်း စတာ( ၁၈-၁၂-၂၀၁၂ )ခုနေ့ပါ။ အားလုံး ပေါင်း (၂၁) ရက်သာရှိသေးတယ်။ဘာမှအဟန့်အတား မဝင်ရင်
တော ဖေဖေါ်ရီ လောက်ဆို ပြတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ခဏလောက်စိတ်အေးအေးထားပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ်မည်။
← ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 7)
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 9) →